Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Wadnaiga Xoreynta Ogadenya (CWXO) oo dagaalo uu la galay cadawga ku gaadhsiiyay khasaare laxaadleh.
Ciidanka Wadnaiga Xoreynta Ogadenya (CWXO) oo dagaalo uu la galay cadawga ku gaadhsiiyay khasaare laxaadleh.
Xarunta dhexe ee JWXO warbixintii ugu dambaysay ee wakaaladda ONA ay soo gaadhsiiyaan ayay ku sheegeen in weeraro uu Ciidanka Waddaniga Xorayntta Ogaadeenya ku qaaday fadhiisimo kala duwan oo uu cadawgu ku leeyahaya dalka Ogaadeenya ayaa waxa uu ku gaadhsiiyay khasaare kala duwan oo isgu jira naf iyo hanti.
Weeraradan oo intooda badan ahaa kuwo loo qorsheeyay inay u fulaan si kooban islamrkaana loogu talagalay in cadawga waxyeelo iyo cabsi galinba loogu gaysto ayaa u dhacay habkii loo qorsheeyay. Dagaaladaas oy ciidanka jabhadu ku hanteen guulo ayaa waxay u kala dhaceen sidan;
– 5/3/12 Dagaal ka dhacay Hora-qaliifo oo ka tirsan deegaanka Qabri –bayax waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacy,isla galinkii dabe ee maalintaa ayaa dib loogu qaaday weerar ciidamada cadawga lamana oga khasaaraha dhabta ah ee soo gaadhay
– 9/3/12 Dagaal ka dhacay Qorra oo ka tirsan degmada Dhanaan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kale
– 12/3/12 Dagaal ka dhacay Booraanka oo ka tirsan degmada Iimayda-bari waxaa ciidanka cadawga lagaga 6 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale
– 13/3/12 Dagaal ka dhacay Wayla-laguxidh waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale, isla taariikhdaa dagaal ka dhacay Mataanalay oo ka tirsan degmada Qabri bayax waxaa ciidanka cadaewga lagaga dilay 1,askari 2 kala waa lagaga dhaawacay.
– 14/3/12 Dagaal ka dhacay Gooray oo ka tirsan Qabri-bayax waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 9 askari waxaana lagaga dhaawacay tiro kale, isla taariikhdaa waxaa dagaal habeenimo lagu qaaday tuulada dalaad oo ka tirsan degmada qabri dahar lamina xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaadhay cadawga .
– 15/3/12 Dagaal ka dhacay B idhiiqa oo ka tirsan Baabili waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawaca 1 kale .
– 16/3/12 Dagaal ka dhacay Dusmo oo ka tirsan degmada aware waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalena waa lagaga dhawaacay
– 17/3/12 Dagaal ka dhacay Sanka-dhane oo ahaa dhabagal waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari 7 waxaana lagaga dhaawacay. Isla taariikhdaa waxaa dagaal ka dhacay Xaaxi oo ka tirsan Aware waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhawacay 3 askari, waxaana mir loo gaystay ceel xaar degmada Baabili,lamana oga khasaaraha ka dhashay mirtaas.
– 18/3/12 Dagaal ka dhacay Ceel-madigaan oo ka tirsan Baabili waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 5 kalena waa looga dhaawacay, isla taariikhda meesha loo yaqaan Horate oo isla Baabili ka tirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari ,tiro kalena waa lagaga dhaawacay
– 20/2/12 Dagaal ka dhacay Hog-dugaag oo ka tirsan wardheer waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
– 25/2/12 Kamiin loo galay kolanyo gaadiid oo maraysay duleedka magaalada wardheer waxaa ciidanka cadawga lagaga gubay hal baabuur iyo dhamaan ciidankii saraa
Dhinaca kale waxaa jira dhibaatooyin ay sidii dhaqanka u ahaa cadawga marka lagaga taagroonaado goobta dagaalka uu dadka shacabka ah kaga aargoosto. Dhibaatooyin oo isugu jira xadhig, jidhdil, kufsi iwm ayaa meela kala duwan ay Ciidamada cadawgu ay dad shacab ah ugu gaysteen kuwaasoo aan warbixnada dambe ku soo qaadan doono.